हाम्रा बाबुबाजेले बनाएको घर भत्काउने अधिकार कसले दियो ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार हाम्रा बाबुबाजेले बनाएको घर भत्काउने अधिकार कसले दियो ?
on: १७ पुष २०६६, शुक्रबार ००:०० पाठक विचार 13 views
हाम्रा बाबुबाजेले बनाएको घर भत्काउने अधिकार कसले दियो ?
सरकारले दशकौैंअघि बनाएका घरहरू डोजर लगाएर भत्काउँदै छ । हाम्रा बाउबाजेले रगतपसिना बगाएर बनाएको घर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सखाप पारिँदै छ । दशकौंसम्म कानूनी रूपमा रहेका यी घरहरू अहिले कसरी गैरकानूनी भए ? यतिबेलासम्म सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका के हेरेर बसेका थिए ? अहिले सरकार, अदालत, नगरपालिक आदि सबै घर भत्काउन लाग्नुको कारण के हो ? यसरी व्यक्तिको निजी सम्पत्ति धमाधम भत्काउने महानगरपालिका राखिरहनुका औचित्य के ?
यसलाई तत्काल विगठन गर्नुपर्छ र नयाँ महानगरपालिका गठन गर्नुपर्छ । ३०÷३२ वर्षसम्म हेरेर बस्ने, अनि अहिले घर भत्काउने अनैतिक महानगरपालिका हामीलाई काम छैन । बाजेबराजुको जग्गामा बनाएको हो घर, महानगरपालिकाको जग्गामा होइन । उसको जग्गामा बनाएको भए भत्काउन पनि सुहाउँथ्यो ।
अहिले आएर हजारौं घर यसरी भत्काउँदा पनि हाम्रो पीडा सुनिदिने कोही भएनन् । यसरी गैरकानूनी काम गर्ने सरकार र महानगरपालिकालाई कसले कारबाही गर्ला ? नागरिकले अपराध गरे राज्यले कारबाही गर्छ । राज्यले नै अपराध ग¥यो भने उसलाई कसले कारबाही गर्ला ?
गल्कोपाखा तथा सामाखुशीबासीहरू
मङ्गलवार, २७ कात्तिक २०७५
नेपाल भारत यातायात सेवा : १० रूटका लागि २२ यातायात कम्पनी सूचीकृत
पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीमा अन्योल
वैदेशिक रोजगार : ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैटौं बैठक हुँदै
गोदाममै थन्कियो अलैंची
यान्त्रिक हलोप्रति कृषक आकर्षित